rapti – Nepaliko Aawaj
ध्रुवराज खनाल चितवन । मनसुन सुरु भएपछि संभावित बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पूर्वी चितवनका स्थानीय तहले जनाएका छन् । पूर्वी चितवनका राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर र कालिका नगरपालिका छन् । राप्ती र कालिका नगरपालिका बाढीसहित पहिरोको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्र हो । खैरहनी र रत्ननगर समथर भुभाग रहेकाले बाढी र डुबान हुने क्षेत्रमा पर्छ । यी चार पालिक...
चितवन । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पछि चितवनमा बाघले आक्रमण गर्दा एक जना घाइते भएका छन् । शुक्रबार दिउसो २ः३० वजेको समयमा राप्ती न.पा. ६ प्यारीढाप भन्ने स्थानमा सोही स्थानमा वस्ने ३३ वर्षका उमेश राईलाई बाघले आक्रमण गरि घाइते बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । भैसी चराउन गएका राईलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्किएको बेलामा बाघले आक्रमण गरी घाईते बनाएको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरीका ...
चितवन । पूर्वी चितवनकाे राप्तीमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु भएकाे छ भने माेटरसाइकलमा पछाडि बस्ने एक घाइते भएकी छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएकाे जानकारी अनुसार आज (बिहिवार) दिउसो करिब ४:४५ बजेको समयमा जिल्ला चितवन राप्ती न.पा. १ पिप्ले स्थित पुर्व पश्चिम लोकमार्गमा पुर्वबाट पश्चिमतर्फ आईरहेको प्रदेश न.२-०२-००१प ५१०४ न.को मोटरसाइकललाई सो...
चितवन । बिरेन्द्रनगरमा रहेको साना किसानको अध्यक्षमा चौथो पटक पौडेल चयन भएका छन् । पूर्वी चितवनको साना किसान कृषि सहकारी संस्था बीरेन्द्रनगरको अध्यक्षमा पुन हरिप्रसाद पौडेल चयन भएका छन् । राप्ती नगरपालिका ८ मा रहेको सो सहकारीको शुक्रवार सम्पन्न २४ औं वार्षिक साधारण सभा तथा आठौ अधिवेशनबाट संचालक समिति अध्यक्षमा पौडेल सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका हुन् । पौडेल यो सँगै सहकारीको अध...
राप्ती क्षेत्रका उद्योगहरुमा औद्योगिक सुरक्षा स्टिकर टाँसको शुभारम्भ
चितवन । राप्ती क्षेत्रका उद्योगहरुमा औद्योगिक सुरक्षा स्टिकर टाँस्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ । बुधवार राप्ती र चितवन उद्योग संघ राप्ती इकाई समितीको कार्यालय उद्घाटन संगसगैं औद्योगिक सुरक्षा स्टिकर टाँस तथा तथ्यांक अद्यावधिक अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो । चितवन उद्योग संघ राप्ती इकाई समितिका सह–संयोजक सुदिप ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राप्ती नगरपालिकाकी प्रमुख तथा ...